Lady Gaga သည်ရောမတွင်အဘယ်ကြောင့်ရှိသနည်း။ • musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း Lady Gaga သည်ရောမတွင်အဘယ်ကြောင့်ရှိသနည်း။
ယခုငါတို့အားလုံးသိသည်အတိုင်း လေဒီဂါဂါStefani Joanne Angelina Germanotta ၏ကလောင်အမည်သည်ရုပ်ရှင်ရုံလောကတွင်သူ့ဟာသူ ပို၍ တိုးပွားလာနေသည်။ သူ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအတွက်အစပြုခဲ့သည် တောခုတ်ဓားသေဆုံးeSin City - မိန်းမအတွက်သတ်ရန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး, သူမ၏အတွက်ဇာတ်ကောင်အဖြစ် Countess အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းအခန်းကဏ္ingအနက်ကိုတိုင်အောင် အမေရိကန်ထိတ်လန့ပုံပြင်eကြယ်တစ်ပွင့်မွေးဖွားလာတယ်Lady Gaga အတွက်အော်စကာဆုချီးမြှင့်ခံရခြင်း တိမ်သော အကောင်းဆုံးသီချင်းအဖြစ်။ သရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်တွင် Lady Gaga ၏ပါဝင်မှုကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာအတည်ပြုခဲ့သည် ကျည်ဆံရထား Brad Pitt နှင့်အတူ။
Lady Gaga သည်ရောမသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး (နောက်ဆုံး) မတ်လတွင်အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်ရုပ်ရှင်ကိုစတင်ရိုက်ကူးရန်ဖြစ်သည် Gucci လူသိများသောဒါရိုက်တာက (ဤနှစ်၏မျှော်မှန်းထားသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်)) Ridley Scott, ထိုလက်ရာများအတွက်အကယ်ဒမီဆု il Gladiatore.
ဇာတ်ညွှန်း၏အဓိကဘာသာရပ်လူသတ်မှုဖြစ်ပါတယ် Maurizio gucci မိမိအဇနီးဟောင်း၏ကိုယ်စား Patrizia reggiani Lady Gaga မှကစားသည်။ အစပိုင်းတွင်ဒါရိုက်တာသည်အစိတ်အပိုင်းများကို Leonardo Di Caprio နှင့် Angelina Jolie တို့အားကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်၊ လေဒီဂါဂါeAdam Driver အော်စကာဆုရသူများဖြစ်သော Al Pacino၊ Robert De Niro၊ Jared Leto နှင့် Jeremy Irons တို့ပါဝင်သည်။
သူမရဲ့စူပါ diva ကြည့်ခြင်းဖြင့် Lady Gaga ကိုမနေ့ကရောမမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ စုဆောင်းထားသောအညိုရောင်ဆံပင်၊ တိရိစ္ဆာန်အ ၀ တ်အစား၊ နေကာမျက်မှန်နှင့်အနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးစသည်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်ကိုသတိမပြုမိဘဲရောမမြို့ရှိလမ်းများပေါ်ရှိ Paparazzi ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအစွန်းရောက်ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်မှာထင်ရှားသောဂန္ထဝင်ပုံစံဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အတိအကျဆိုရလျှင်သူမသည် Patrizia Reggiani ၏အခန်းကဏ္onကိုယူလိမ့်မည်ဟုမမေ့ပါနှင့်
အဆိုပါ Gucci ကိစ္စတွင်။
၁၉၉၅ မတ် ၂၇ တွင် Gucci ၏အမွေဆက်ခံသူ Maurizio Gucci သည်သူ၏ရုံးခန်းတည်ရှိရာအဆောက်အ ဦး ၏ဝင်ပေါက်တွင်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၂ နှစ်ကြာလက်ထပ်ပြီးသမီးနှစ်ယောက်မွေးပြီးတဲ့နောက် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ Patrizia Reggiani ကိုကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ပြီးငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ထားခဲ့တယ်။ Patrizia Reggiani သည်မနာလိုမှုနှင့်အတူစွဲလမ်းနေပြီးသူမ၏ခင်ပွန်းဟောင်းအားသတ်ဖြတ်မှုကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဗိသုကာဖြစ်လာသည်။ မီဒီယာက Black Widow ဟုခေါ်ဝေါ်သောကြောင့်သူသည်ထောင်ဒဏ် ၁၈ နှစ်ကျခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ တွင်သာလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်အတွက်ဇာတ်ညွှန်းကပြုလုပ်ခဲ့သည် ရောဘတ် Bentivegna အရာစာအုပ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည် Gucci ၏အိမ်: လူသတ်မှု, ရူးသွပ်မှု, စွဲမက်ဖွယ်ရာနှင့်လောဘတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံပြင် ကရေးသားခဲ့သည် Sara ဂေး Forden.
Lady Germanotta ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာနောက်ထပ်အနုပညာဆိုင်ရာအထောက်အထားကိုတွေ့ဖို့ငါတို့အားလုံးစောင့်နေကြတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးအဆိုပါ Giro d'Italia 2021
နောက်ဆောင်းပါးအမျက်ဒေါသနှင့်ကျူးကျော်မှုကိုမည်သို့စီမံရမည်နည်း။ 10 လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပြုချက်များ
ဖရန့်ခ်မီနီဇ်သည်ဖခင်တစ် ဦး အဖြစ်သူ၏ဘဝသစ်အကြောင်းကိုပြောဆိုသည်
Huda အလှအပမှမျက်လုံးအသစ် Palet ကိုကြည့်ရှုလေ့လာသည်